Basikety – «N1B lehilahy» : nanarina ny fahavoazany ny BCO Boeny | NewsMada
Basikety – «N1B lehilahy» : nanarina ny fahavoazany ny BCO Boeny
Nitohy, omaly tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina, ny andro fahadimy hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja basikety ho an’ny sokajy “N1B”, lehilahy. Mbola samy ao anatin’ny fiadian-toerana, hiakarana amin’ny dingana manaraka avokoa, ny rehetra. Hatreto, mivadibadika be ny vokatra azon’ny ekipa tsirairay.
Porofon’izany, afaka nanarina ny fahavoazany nandritra ny fahareseny teo amin’ny andro fahefatra ny ekipan’ny BCO Boeny, izay nanilika ny NGB Analamanga, tamin’ny isa tery, 77 no ho 73. Niady ny fihaonan’ny roa tonta, saingy efa tany amin’ny faramparan’ny fizaram-potoana fahefatra farany vao tafavoaka ho mpandresy ny tovolahin’i Boeny.
Tojo tsy fahombiazana kosa ny ekipan’Alaotra Mangoro satria samy resy avokoa ireo solontenan’izy ireo, omaly. Anisan’ireny ny USBA izay niondrika teo anatrehan’ny NCBB Boeny, tamin’ny isa, 76 no ho 69, ary ny AS Fanalamanga, izay lavon’ny MBC Atsinanana, tamin’ny isa, 79 no ho 69. Naka isa telo kosa ny Cnaps Itasy, rehefa nandresy ny ABBS Analanjorofo, tamin’ny isa, 88 no ho 39.